Last updated: Jan. 05 2018 | 4 min akhri
Taariikhaha ku noqon karaa culays qof walba laakiin gaar ahaan si haddii aad u baxayso taariikhda leh nin cajiib ah oo run ahaantii lahaa aad u jeclahay si aad u hesho in la ogaado oo weli aad u yihiin xishood iyo habacsanaanta. Badanaaba waa wax taas oo la iska indha-. Qof walba oo kaliya u muuqataa in ay awoodaan si ay u helaan "nin up" geesi ah ama ama "Haweeney ilaa" laakiin sida uu qofka ku xishood iyo sirgaxan, waxaan ka marag karaa lahaa in aan noqon in ay fududahay waa in aad noqon.
Waxay leedahay faa'iido darrada badan oo ay ka mid yihiin awood uma yeelan in ay ka hesho in ay ogaadaan ninka, ka sii qarkiisa ka badan qof kale uu noqon doono taariikhda iyo in wax ka maqan xiriir ah oo aad ka dhigi kareen haddii aad ha dhabta ah ee aad ka soo. Dabcan waxaa jira faa'ido in ay sababta oo ah haddii qof run ahaantii aad u jecel yahay markaas waxay sameyn doonaan dadaal ka dibna aad doonto in ay dhab ahaantii aad jeceshahay. Ka dib markii dhammaan aynu ku nool dunida cajiib ah oo dhaqso badneyd iyo xawaaraha in aanu si fudud ma dhici karto in noloshooda aqooneed. Waxay u egtahay inay uga yaacday ilaa nolosheena gaarka ah sidoo laakiin haddii qof run ahaantii aad u jecel yahay ma ay laha doonaa inta ay qaadato in aad ku biiritaankiisa.
Waxaan u tegayaa inaan ku hadlo intan waxa aan sameyn karo si loo hagaajiyo sida aan ka soo hor taariikhda a laakiinse anigu waxaan ahay Qurbajoogga Somaliland, oo aanan rabin inuu xidho qof kasta oo kale oo hoos kasta ama, in this hab si tartiib ah in uu u baahan yahay waa in la soo shaqeeyay on oo dhab ahaan ma noqon doonto habeen kaamil ah.
Dharka Si aad u sheegan
Tani waa tip a kaas oo lagugula talinayaa inaad u nin kasta ama qof dumar socday taariikh leh in oh-si-kulul lab! Laakiin waa wax aad u muhiim ah marka aad tahay qof xishood ah, Qofka sirgaxan. Waanu wada muujiyo cidda aynu nahay marayo waxa aan xirto haddii ay tahay lala yaabo ama ka badan demure iyo haddii aad halgan ugu jiraan inay la xiriiraan qofka aad tahay via erayada haddaba bal sidee baad u labistaan ​​kaa caawin karaan in ay guud ahaan ku riday ninkii waxa aad kuma sheegi karo erayada. Tusaale ahaan haddii aad u labistaan ​​in arrin si lala yaabo u muujiyaan laga yaabaa in aan ku yidhi wax kasta oo aad tahay taageere Lady Gaga ama in aad tahay arrin lama filaan ah oo xiiso leh. Had iyo jeer xasuuso inaad u labistaan ​​sida aad u aragto naftaada iyo sida aad u maleyneyso in uu qof dumar kaamil ah ama nin u labistaan ​​lahaa. Waa mid aad u fudud in ay ku dhacaan dabinka gaadhay. Aan aniga qudhayduba. Iyadoo in shirkada dadka oo aan u jeclaa waxaan ku labisan sida aan dareemo inay jeclaan lahaayeen ii labistaan ​​sababtoo ah waxaan doonayaa inaan iyaga i jeceshahay laakiin khatarta ah in uu yahay in xitaa hadii ay adiga oo kale aanay aad ka jeelahay ee aad iyo gaar ahaan haddii aad raadinayso socdeyba suurtogal tahay ku talinayaa lahaa inuu ha arkaan in waxa aad jeceshahay in ay sababtoo xirto ka dib dhan taas nooca style aad xiran doono iyaga la waayo, xiriirka nolosha oo dhan.
Qaado Xukunka kasta Sida ay timaado
Qaybta ugu weyn ee ka xishoon iyo habacsanaanta waxaa overthinking iyo aad maqasho waxyaabo badan oo aad u baahan tahay oo kaliya in ay joojiyaan overthinking xaaladda. Laakiin haddii in si fudud ahayd ka dibna dadka oo keliya u qaban lahaa. Overthinking waa wax noqdo gundhig ugu yahay qof laakiin waxaa looga gudbi karo. Waxa kaliya ma ahan arrin sahlan sida ay dhan libdho mar. Waxaad u baahan tahay inaad si tartiib ah oo marka la eego taariikhda a qaadan qaado xukun kasta sida ay timaado. Isku day in aadan ka fikir taariikhda aad u badan ka hor. Maskaxdaada Buuxi waxyaabo kale sida riwaayadaha, reading, Bandhigyada TV, filimo, dheeraadka ah. Waxaa fure u ah oo kaliya si aad maskaxdaada sida badan off taariikhda si sida ugu badan ee shakhsiyadda ka soo Baxday taariikhda sababtoo ah adiga oo aan helnay wakhti aan ku fakarto wax kasta oo dhici kara iyo sida ay tahay in aad ka jawaabto iyo wixii waa in aad weydii.
Ka fikir Sidee baad u wajahaysaa tan toban sano
Marka aad ka fikirto sida aad dareemi doonto wax muddo toban sano ah waa hab aad u wanaagsan qiimaynta muhiimadda ay leedahay xaaladda a. Isku day inaad ka fakarto in ay tahay sida ugu muhiim oo waa weyn sida aad u bixi samaynta inuu noqdo. Waxaad dhahdaa waxaad samayn khalad sameyso, sidaas waxa? Waxa ay noqon doontaa walaac weyn in aad muddo toban sano ah marka aad u badan tahay ayaa la kulmay doonaa ninkii riyooyinkiinna aad? Haddii qof aan iska eafiya kartaa qaladaad yar ka dibna sameeyo aad dhabtii doonaysid inaad iyaga la? Ka sokow, way ogaandoonaan noqon nervous aad iyo ay u badan tahay doonayo inaan ka ah qaladaad dhowr ah isu sidaa daraadeed waxa ku saabsan kooda Cafiyi oo rajeynaya iyagu kuwiinna Saamaxeen doonaa. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in qof qaba si joogto ah aad u qeexayaa on waxyaabaha aad qalad ah samayn noqon. Waa maxay nooca nolosha in uu noqon doono ka dib markii dhan?
Tani ma u habeen ku dhici. Waxaa laga yaabaa inaad xitaa leeyihiin musiibooyinka shukaansi qaar ka mid ah meesha aad halkaasaan u fadhiisan oo dhihi aad u yar. Laakiin waa dhan oo ku saabsan horumarka. Ka qeybgal wax alla wixii bulshada sida aad kara iyo in ka badan waqtiga aad kalsooni ku hadlaya iyo hagaajin doonaa. Oo markii aad samayn nin xaq ah waxaa jiri doona inay dhageysan doonaan hadii uu aan hore u yimaadaan, oo derbiyadeeda kuwii dumiyey iyo markii uu ku jiraa noloshaada, kuwaas oo dhan tabeysa, sida aad guud ahaan u yimid iyo sida loo qaadato waqti dheer si aad u hesho qof aad Ma samayn karo xiriir in habka kuwa kale mooddaa inay si fudud aan muhim aheyn doonaa. Waxaan aad rabto oo dhan si daacad ah oo nasiib wanaagsan.